lundi, 22 mai 2017 22:26
Rajaonarimampianina: Tsy ny asa maharitra no sahaniny, fa tapi-maso hatrany
Taratra sahady ny kabary fampielezan-kevitra nataon’ny Filoha Hery RAJAONARIMAMPIANINA teny amin’ny lapan’ny fanatanjahan-tena Mahamasina io maraina io raha nanolotra fanampiana ho an’ireo sahirana sy ireo zokiolona izy, izay notronin'ny vadiny sy ny governemanta notarihan'ny Praiminisitra.
Hita teny amin’ny lapan’ny Mahamasina ihany ny tsy fankatoavan’ny vahoaka Malagasy ity fitondrana ity. Ny nahamay ny olona tonga teny dia ny handray ireo menaka sy tsaramaso ary vary izay natolotry ny filoha izay miendrika fanambatambazana ny mponina an’Antananarivo.
Marihina moa fa dia tsy tonga nanotrona teny ny minisitry ny mponina izay tokony hitondra teny, koa dia ny minisitry ny serasera indray no nisolelaka niezaka nipasoka fa tsy ny tsikera no ilaina fa ny fifanantonana.
Difotra ao anatin'ny raharaha Claudine Razaimamonjy moa izy ireo, ka dia manapimaso anadinoana nefa tsy ho afabela amin'io raharaha io.
lundi, 22 mai 2017 21:04
Mapar Boribori-tany faharoa: Mitohy ny hetsika fanampiana ny mpiara-belona
Natomboka ny asabotsy 20 mey teo amin'ny Sekoly tsy miankina iray teny Ambohipo ny "Cours gratuit" ho an'ny mpanala fanadinana BEPC sy BACC ho an'ny Boribori-tany faharoa.
Mpianatra miisa eo amin'ny 250 eo no misitraka izany "cours gratuit" izany, izay ny taranja fototra no tena ho hamafisina mandritra ny 6 herinandro ho an'ny mpanala BEPC ary 7 herinandro kosa ho an'ny mpanala BACC, isaky ny asabotsy tontolo andro.
Izao hetsika izao dia iarahana amin'i Solombavambahoaka Lanto Rakotomanga, izay voafidy teto amin'ny boribori-tany faharoa amin'ny anaran'ny Miaraka amin'ny Prezida Andry Rajoelina, na ny Mapar.
lundi, 22 mai 2017 18:50
Sambava: Maty ilay Zaza menavava
Tsy naharitra ela ny hafalian'ireto Ray amandreny sy ny fianakaviana, raha ilay zazavavikely nolazain'ny mpitsabo fa maty vao teraka, ka nentina andeha halevina dia nifoha sy nitomany teny an-dalana.
Re tokoa manko izao fa dia maty indray ilay zaza menavava kely. Alahelo miaro fahatezerana ny an'ireto fianakaviana. Raha tsy nolazaina fa maty ity zaza hoy ireo, tsy noentina nofonosina tao anaty baoritra ilay zaza kely, ka mety izay indray no nahasempotra azy, ka nahatonga izao fahafatesana izao indray.
lundi, 22 mai 2017 18:49
Corée du Nord: Lancement de nouveaux missiles balistiques
Pendant que Donald Trump effectue sa première sortie au Proche-Orient, le jeune Kim Jong-Un a de nouveau lancé des missiles balistiques de moyennes portées, ce dimanche.
Avec une portée de 4500 km, Pyongyang redouble ses efforts pour mettre au point son missile capable d'acheminer une tête nucléaire pour atteindre le continent américain.
Washington, Séoul, Tokyo ont dénoncé ce 10ème tir de missile depuis le début de l'année. Le Conseil de sécurité de l'ONU vont se réunir d'urgence demain mardi.
lundi, 22 mai 2017 18:06
Sambava : Zaza menavava efa nambaran’ny mpitsabo fa maty, indro velona indray
Ny 21 may 2017 tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro dia nisy renim-pianakaviana tanora iray tonga hiteraka tao amin’ny CSB2 Anjagnoveratra. Saro-piterahana izy nandritra izany.
Nanao ny ezaka rehetra ny mpampivelona ary tafavoaka ihany ilay zaza ary vavikely, saingy hita fa tsy miaina.
Natao ny famerenana aina rehetra ary lany haika ny tao amin’ilay CSB2 ka nampahery ny fianakivana ary nanaovan’ny mpitsabo tompon’andraikitra voalohany tao an-toerana filazana fahafatesana fa ny reniny kosa mbola narahi-maso tao ny fahasalamany.
Donald Trump au mur des lamentations à Jérusalem.
lundi, 22 mai 2017 16:38
lundi, 22 mai 2017 14:12
Antsalova : Mirongatra ny aretina ambalavelona
Zazavavy mpianatra miisa 11, iray kilasy ao amin’ny sekoly katolika Immaculée Conception eto Antsalova no azon'ny ambalavelona tamin’ny zoma teo. Nitohy izany androany maraina ka nisy tranga vaovao 7 hafa koa ary niitatra tao amin'ny kilasy faha-5, ka nifamonjena sy nentina nanatona ny fiangonana FLM mba halana devoly.
Sahiran-tsaina ireo ray aman-dreny sy mpanabe ary ny mpitantana ny sekoly noho izany satria ny fanadinana efa mihamanakaiky, kanefa ny zaza azon'aretina hafahafa. Mihinjakinjaka sy mikiakiaka ary tsy tana fa matanjaka dia matanjaka ireo voa.
Efa manao famotorana mikasika ity trannga ity ny Polisy sy ny tompon'andraikitra ao amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antsalova.
lundi, 22 mai 2017 14:04
Augustin Andriamananoro : Mantajaka ny antoko MAPAR
Tsy nisalasala ny filoha lefitra nasionalin’ny vondrona MAPAR nilaza fa « matanjaka ny antoko ary vonona hiatrika ny fifidianana ho avy eo, indrindra amin’ny taona 2018 ».
Zava-dehibe ny fanajana ny safidim-bahoaka raha ny fanazavany ary hiezaka hanaraka izay ny antoko, porofon’izany ny fiandrasan’izy ireo ny taom-pifidinana ho avy io.
Tonga nanotrona ny lanonana fifampiarahaban’ny MAPAR Mahajanga noho ny taona vaovao i Augustin Andriamanoro, ny faran’ny herinandro teo. Aman’arivony no namaly ny antso, midika izany fa mbola ao ampon’ny Malagasy ny filohan’ny tetezamita sady mpitarika ny antoko Andry Rajoelina.